Updated: 2016-03-30 14:22
တဲန်းဂျင်း ရဲ့ မြို့ ထဲ ၀ယ်
ခရူးရှူး ပြည်နယ်တခွင် ရဲ့ မြို့ထဲ ဖြစ် တဲ့ တဲန်းဂျင်း ခရိုင် ပိုင်း ၊ ဖူးခုအိုးက ကို လာ လည်တဲ့ လူ တွေ မဖြစ်မနေ သွား တဲ့ နေရာလေး ဖြစ် ပါတယ်။ ဟာကတ ဘူ တာ ကို ပတ် ပတ် လည်ထား တဲ့ ဟာကတ ရှော့ ပင်း...
Updated: 2016-03-29 15:58
Animate Fukuoka Tenjin store
Animate Fukuoka Tenjin store ဟာ အန်းနီးမဲ တွေ ဂိမ်း တွေ နဲ့ စာအုပ် တွေ ကားတွန်း စားအုပ် တွေ ကို ရောင်း ချတဲ့ ဂျပန် နိုင် ငံ တွင်း နာ မည် ကြီး တဲ့ အရောင်း ဆိုင် တစ် ဆိုင် ဖြစ် ပါတယ်။ Animate Fukuoka Te...
Updated: 2016-03-29 15:20
ခါရမစွတ် ရထား ဟာကတဘူတာဆိုင် ခွဲ
ခါရမစွတ် ထရိန်း ဟာကတ ဘူတာ ရှေ့ ဆိုင် ခွဲ ဟာ ဟာကတ ဘူ တာ ချိခုရှိ ထွက်ပေါက် က နေ ၁မိနစ်ခန့် လမ်းလျောက် ရတဲ့ နေရာ မှာ တည် ရှိ ပါ တယ်။ ဓါတ်ပုံ မှာ ပါ တဲ့ အတိုင် အဖြူရောင် အဆောက် အဦး ၈ ထပ် မှာ ရှိ ပါ တယ်။...
Updated: 2016-03-29 15:01
mina တဲန်းဂျင်း（မီနာ တဲန်းဂျင်း）
၀ါတနဘဲ လမ်း ရဲ့ မြောက် ဖက် မှာ တည် ရှိ တဲ့ ဖက် ရှင်အဆောက်အအုံ ၊ အရောင်း ဆိုင်ထဲ မှာ ခရုး ရှူး အကြီး ဆုံး ယူနီကလော က အမျိုး အစားစုံ လင်စွာ ပြသရောင်းချနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင် ဖက်ရှင် ၊ အထွေထွေ ၊ မိတ်ကပ...
Updated: 2016-03-29 14:52
ဖက်ရှင် နဲ့ အစား အသောက် ၊ ဟို တယ် ၊ ရုပ် ရှင် ရုံ တွေ ထိ ဆိုင် အများ အ။ပြား ဖွင့် လှစ် ထား ပါတယ်။ ဒီနှစ် ၄လပိုင်း မှာ ကြီး မား လှ တဲ့ ဖွင့် ပွဲ တစ် ခု ကို စီစဉ် နေပါ တယ်။ နယူးယော့ ရဲ့ နာ မည် ကြီး စားေ...
Updated: 2016-03-29 14:42
ကန်နယ်လ် စီးတီး ဟာကတ
၁၉၉၆ ခု နှစ် ( ဟေးဆေး ၈နှစ်) ရောင်းဝယ် ရေးအဆောက် အဦး ကြီး ၇ ခု က စု စည်း တည် ရှိ နေ ပါတယ်။ အများ ပြားေ သာ ဆိုင်ခန်း တွေ က ရှိ ပြီး ရှော့ပင်း ၊ ပြဇာတ်ရုံ ၊ ဟော်တယ်၊ ရုပ်ရှင် ရုံ တို့ က လူအများပြား...
Updated: 2016-03-16 16:53
မိုဂျိ ရခု နော့ ယု
ပင်လယ် ပြင် ကို မြင် နိုင်တဲ့ အမိုး ဖွင့် ရေပူ စိမ် ကန် တွေ ဖြစ် ပြီး တော့ ၊ သဘာဝရေကန် နဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အချိန် တို့ ကို ဖြတ် သန်း နိုင် မဲ့ အမျိုး မျိုး သော ရေစ်ိမ် ကန် တို့ က...
Updated: 2016-03-16 16:04
အယ်ဒို ခောတ် ကတည်း က ဟာ က တရဲ့ လူတန်း စား မရွေး ကြိုက် နှစ် သက် ခဲ့ တဲ့ စား စရာတစ် မျိုး ဖြစ် ပြီး တော့ ၊ မနက် စာ အတွက် မရှိ မဖြစ် ရာ ဇ၀င် ရှိ တဲ့ အစားအစာတစ် မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ် မြော...